Anund फारम र Vike जगिङ ट्रयाक | Holmbygden.se
Anund कृषि जगिङ ट्रयाक
जो चाहनुहुन्छ ती एक ताजा स्किइङ वा राम्रो गर्मी पैदल लिन लागि दुई ट्रेल्स खुला वर्ष राउन्ड छन्. म 2,5km मा Anundgård छोटो अलिकति undulating र उज्यालो ट्रयाक. साथै 8km मा थप वैकल्पिक ट्रयाक छ (t.o.r.) Anundgård देखि Österström गर्न, जो छोटो जडान. सुरु / राम्रो पार्किङ सुविधा संग समाप्त लागि उपयुक्त साइटहरु Holm Vallen छन्, Anund Manor विद्यालय र Österströms एस्टेट. जाडो मा, ट्रयाक हिउँ आवरण अनुमति दिन्छ जब राम्रो अवस्थामा निरन्तर राखिन्छ. दायाँ तपाईं सधैं हालको ट्रयाक स्थिति पाउनुहुनेछ. बिजुली प्रकाश स्वतः छ र घडी सम्म मा रहन्छ 22:00.
जानकारीको लागि सम्पर्क:
अधिकतम Wikholm 070-669 44 52
. नवीनतम रिपोर्ट
को नाली देखि:
Holm Wallen मानचित्र ट्रेल्स
(ठूलो आकार लागि – यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
नक्सा, आदि संग थप जानकारी. skidspår.se मा पाउन सकिन्छ:
Skidspår.se / Vasternorrland / Sundsvall / स्टकहोम embankment
Vike जगिङ ट्रयाक
Vike पनि एक 2,5 यसको वार्षिक stafettävlingar लागि जानिन्छ ट्रेल्स को किलोमिटर. ट्रयाकको उज्यालो छ र सुरु र समाप्त Vike स्कूलमा. तपाईं पनि छोटो पाश चयन गर्न सक्नुहुन्छ 1 मी. ट्रयाकको Vike स्वैच्छिक मिश्रित द्वारा व्यवस्थित गरिएको छ.
रोशनी को चैन प्रज्वलन बेकरी मा दीपक अन्तर्गत मार्क संग स्वयं गरिन्छ, स्पट मा साइन हेर्न. रोशनी स्वतः बन्द हुनेछ 21:30.
नक्सा, आदि संग थप जानकारी. skidspår.se मा पाउन सकिन्छ: Skidspår.se / Vasternorrland / Sundsvall / Vike
के हुनेछ स्किइङ अवस्था?
विस्तृत स्थानीय मौसम आउँदै दिनमा Holm लागि पूर्वानुमान तपाईं देख्ने मौसम.
फिर्ता पर्यटन गर्न / आराम
Holm फाइबर - जानकारी
समाचार विजेट अघिल्लो समाचार महिना चयन सक्छ 2019 (1) मार्च 2019 (5) फेब्रुअरी 2019 (3) जनवरी 2019 (1) डिसेम्बर 2018 (1) अक्टोबर 2018 (1) सेप्टेम्बर 2018 (4) अगस्ट 2018 (1) जुलाई 2018 (5) जुन 2018 (6) सक्छ 2018 (6) अप्रिल 2018 (2) मार्च 2018 (2) डिसेम्बर 2017 (2) जुलाई 2017 (2) जुन 2017 (1) सक्छ 2017 (4) अप्रिल 2017 (2) मार्च 2017 (4) फेब्रुअरी 2017 (4) जनवरी 2017 (1) डिसेम्बर 2016 (2) नोभेम्बर 2016 (1) सेप्टेम्बर 2016 (4) जुन 2016 (5) सक्छ 2016 (5) अप्रिल 2016 (3) मार्च 2016 (6) फेब्रुअरी 2016 (4) जनवरी 2016 (2) डिसेम्बर 2015 (3) नोभेम्बर 2015 (4) अक्टोबर 2015 (1) सेप्टेम्बर 2015 (5) अगस्ट 2015 (4) जुलाई 2015 (4) जुन 2015 (3) सक्छ 2015 (7) अप्रिल 2015 (4) मार्च 2015 (4) फेब्रुअरी 2015 (4) जनवरी 2015 (8) डिसेम्बर 2014 (3) नोभेम्बर 2014 (4) अक्टोबर 2014 (5) सेप्टेम्बर 2014 (3) अगस्ट 2014 (4) जुलाई 2014 (2) जुन 2014 (6) सक्छ 2014 (5) अप्रिल 2014 (8) मार्च 2014 (11) फेब्रुअरी 2014 (4) जनवरी 2014 (7) डिसेम्बर 2013 (12) नोभेम्बर 2013 (12) अक्टोबर 2013 (10) सेप्टेम्बर 2013 (9) अगस्ट 2013 (15) जुलाई 2013 (13) जुन 2013 (18) सक्छ 2013 (17) अप्रिल 2013 (13) मार्च 2013 (11) फेब्रुअरी 2013 (7) जनवरी 2013 (13) डिसेम्बर 2012 (9) नोभेम्बर 2012 (9) अक्टोबर 2012 (6) सेप्टेम्बर 2012 (10) अगस्ट 2012 (10) जुलाई 2012 (4) जुन 2012 (11) सक्छ 2012 (10) अप्रिल 2012 (4) मार्च 2012 (7) फेब्रुअरी 2012 (6) जनवरी 2012 (3) डिसेम्बर 2011 (3)
Risk för kö pga beläggningsarbete. Trafiken ... थप पढ्नुहोस्
22/5: टाढा हानि तर पु ...
21/5: टाढा खेल र फुटबल उपहार ...